Editor Ee Doorashada November 17,2019
Ugu Weyn Ee Orchid Miltoniopsis
Miltoniopsis: sida loo xajiyo orchid guriga dhexdiisa
Miltoniopsis Orchid waa mid aad u qurux badan oo qurux badan oo dhalaalaya oo leh dhalooyin waaweyn iyo caraf udgoon leh. Waxay leedahay saameyn qurux badan oo qurxoon oo waa ikhtiyaarka guusha-guuleysiga ah ee labada aqal iyo guriyeyn, xafiis iyo xarun kasta oo xaalado ku habboon loo abuuri karo. Ma taqaanaa?
Tamaandhada delicious for jacaylka miro leh dufan - sharaxaad ka duwan kala duwan ee hybrid ee yaanyo "Jacayl"
Sida loo kobciyo Murayu guriga: Talooyinka beeraha ubaxa
Boqoshaada la cuni karo iyo sunta leh ee sii kordhaya
Cherry-Cherry Hybrid - Toy kala duwan
Kaabashka Beijing waa khudradda khaaska ah, daboolka fiitamiinada iyo maadooyinka oo aad u muhiim u ah shaqada wanaagsan ee jidhka bini'aadamka. Faytamiin Faytamiin laga soo qaado khudraddan waa mid aad u caan ah oo aduunka oo idil ah, tani maahan mid la yaab leh, sababtoo ah waa qayb ka mid ah cuntooyinka caafimaad leh oo kuu ogolaanaya inaad haysato tiro aad u fiican. Read More
Habitat boodhka Habitat guriga dhexdiisa. Sidee looga takhalusi karaa arachnids?
Guriga loogu talagalay indoutok iyo mandarin duck ayaa sameeya
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Orchid Miltoniopsis 2019